Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad safar tareen, aan shaki ku jirin ay jiraan waxa ay noqon doonaa ugu horeeyay ee badan. Daacadii, qof kasta oo la siiyaa safarka tareenka fursad ayaa si buuxda ugu waashay! maxaad? Sababtoo ah waa heer sare! Lid ku ah raacid diyaarad ahayn, tours baska raaxo, ama raacid mas'uul -iyad leh baabuur, safar tareen ah waa ammaan, deg deg ah laakiin cajiib ah oo soo jiidasho iyo jaceyl. Mid baa ku doodi kara in safarka tareenka uu yahay isku dhafka dhabta ah ee maqnaanshaha maqnaanshaha Virginia Woolf iyo wax ku oolnimada casriga ah. Ah, aad arki doonaa naftaada horeba.
Ma ballan qaadi karno waxa aad helaysaa in Eetaan Hawke – xaaladda Julie Delpy Tareen Journey on koowaad tareen kortaan (Oh, soo, ayaan waxaan oo dhan ma aragtay iyo daalay, in ka badan Ka hor inta gebogebada, si qarsoodi ah, rajeynaya aynu lahaan doono sheeko la mid ah jacaylka dhici noo.) Jejebiso ee Shell oo aynu waayo aragnimada ku dhacaan. Imisa caaqil, exhilarating, iyo sheekaysiga xiiso leh waxaad yeelan doontaa? The waayo-aragnimo iyo helitaanka si ay ula falgalaan dadka dhaqamada kala duwan waa dareen cajiib ah! ma garan kartid sida badan qurux badan saaxiibtinimada idin dhisi doonaa, imisaad burburinaysaa, ama imisa shakhsiyaad oo neef leh ayaad la kulmi doontaa. Haddii aadan aad u xishood, noqon mid ka mid ah marka hore in ay jebiyaan baraf iyo hadal dadka aad ka heli xiiso leh.
Safarka koox ahaan iyo maalmo gaar ah hoos u qiimaha weyn u tigidhka tareenka (haa, run ahaantii aad ka heli karto dhimis on your tigidh si ay u, odhan, Trenitalia haddii aad u tagto on maalmaha fasaxa). Waxay sidoo kale ku siinaysaa qof aad la wadaagto khibrada oo aad wax kaga aragtid aragtida dadka kale. Taasi, iyo – ku sakhraansan dal shisheeye oo Yurub ah waa dad aad u ogaato badan dhexdooda hubaal wanaagsan waxaa Solo samaynaya… ma sax baa, mise waan saxanahay?
Ku raaxayso safarka tareenka, naftaada sii fasax inaad nasato, oo soo dhaweyn wax kasta oo ku saabsan safarkaaga tareenka! Meesha ugu kalsoonida badan ee lagu dalban karo tikidhada tareenkaagu waa saveatrain.com Hubaal, sidaas darteed – heli movin '!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)